Shariif oo muddo kadib la arkay & Shakiga kulankii Maanta Guudlaawe Layeeshay | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Shariif oo muddo kadib la arkay & Shakiga kulankii Maanta Guudlaawe Layeeshay
Shariif oo muddo kadib la arkay & Shakiga kulankii Maanta Guudlaawe Layeeshay
Madaxweynaha maamulka HirShabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka, Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kale ah Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta.
Kulanka Sheekh Shariif iyo Guudlaawe oo ka qabsoomay Hotel Airport ee ku yaala xayndaabka Xalane ayaa waxaa looga hadlay xaalada dalka, arrimaha doorashooyinka iyo xiisadaha kasoo cusboonanaya deegaano ka tirsan maamulka HirShabeelle.
Inta uu socday kulanka ayaa waxa uu madaxweynihii hore ee dalka uga mahad-celiyey Guudlaawe doorkii uu ka qaatay heshiiskii doorashada ee kal hore lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Waxa uu ku amaanay kaalinta uu ka ciyaaray heshiiska doorashada, taasi oo dalka u jiheysay dhankaa iyo doorasho, islamarkaana ka bad-baadisay jahwareer siyaasadeed iyo mid amni.
Si kastaba, Kulanka maanta uu Guudlaawe la qaatay madaxweynihii hore ee dalka, Sheekh Shariif ayaa imanaya xili uu maalmihii dambe ee uu magaalada Muqdisho ka waday kulamo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo xal ka gaarista tabashada reer Hiiraan.
Previous articleQM oo shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay wajaheyso xaaladdii ugu xumeyd
Next articleCiidan uu hogaaminayo Saadaq Joon oo dhaqdhaqyo iyo abaabulkii ugu dambeeyay kawada Galmudug